Su'aalaha Gaadiidka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Yaan wacaa haddii ardaygaygu baska wax kaga waayo?
Ma la siin doonaa ilaalada ka gudbaya dhammaan jidadka mashquulka badan?
Kani miyaa kharash cashuur laga jari karo?
Ayaa maamula barnaamijkan?
Degmadu ma siin doontaa arday kasta kaarka muujinaya inuu isagu / iyadu u qalmo inuu baska raaco?
Darawalku ma ogaan doonaa haddii ardaygu diiwaangashan yahay oo uu bixiyay khidmadda?
Ardaygu ma ku soo qaadan karaa qalabkooda baska?
Ardayga Koowaad wuu lumay waana la helay waana lala xiriiri karaa 952-470-5366.
Waalidiinta ayaa mas'uul ka noqon doona carruurtooda wixii ka baxsan hantida degmada dugsiga.
Kharashaadka gaadiidku waxay xaq u yeelan karaan hoos u dhigidda iyo ka-noqoshada waxbarashada gobolka. La xiriir canshuurahaaga diyaarinta si aad u ogaato haddii qoyskaagu u qalmo. Rasiidhada waxaa lagu bixin doonaa codsiga waalidka.
Kormeeraha Gaadiidka iyo Xisaabinta Ardayda ayaa maamula barnaamijka. Waxay ku yaalliin Xarunta Adeegga Degmada (5621 County Highway 101).
Kaarka baska ayaa la siin doonaa arday kasta oo u qalma inuu raaco baska. Kaar ayaa loo baahan doonaa si baska loogu raaco.
Darawalku wuxuu yeelan doonaa liis rakaab ah oo muujinaya magacyada arday kasta oo xaq u leh inuu raaco baska, labadaba kuwa bixiyay khidmadda, iyo kuwa raacsan ee deggan meel ka baxsan laba mayl.
Haddii arday uu saaran yahay qalab, qalabku waa inuu ku habboon yahay dhabta ilmaha haddii kale gaadiid kale waa in loo habeeyaa aaladda.
Su'aalaha U Qalmida
Ardayda waxbarashada gaarka ah ma looga baahan doonaa inay iibsadaan kaarka baska?
Arday ka diiwaangashan dugsi hoos yimaada Qorshaha Xulashada Waalidka ee Degmada (POP) ma loo oggolaan doonaa inuu raaco baska degmada?
Ardayga ka diiwaangashan dugsi hoos yimaada qorshaha diiwaangelinta furan ee Degmada ma loo oggolaan doonaa inuu raaco baska degmada?
Canuggayga saaxiibkiis ma raaci karaa baska haddii saaxiibku aanu bixin khidmadda baska?
Dhammaan ardayda, oo ay ku jiraan ardayda waxbarashada khaaska ah, oo saaran bas xajmi buuxa leh kuna nool laba mayl u jirta dugsiga degganayaasha ayaa laga doonayaa inay bixiyaan khidmadda adeegga baska. Si kastaba ha noqotee, sharciga gobolku wuxuu dhigayaa in adeegga basaska bilaashka ah la siiyo ardayda waxbarashada gaarka ah ee u baahan gaadiid qayb ka ah qorshahooda waxbarasho shaqsiyeed, iyadoon loo eegin meesha ay ku nool yihiin. Natiijo ahaan, ardayda waxbarashada gaarka ah ee raacaysa baska waxbarashada khaaska ah waxay raaci doonaan lacag la'aan lagamana doonayo inay qaataan kaarka baska.
Ardayda POP waa la siin karaa gaadiid haddii ardaygu la kulmo baska joogsiga baska caadiga ah ee ugu dhow ee la heli karo, iyadoo lagu saleynayo awoodda baska. Degmadu ma beddelayso jidadka basaska ama u safri mayso goob kale oo ka-qaybgal si ay u soo qaado ardayda.
Ardayda ka diiwaangashan furan ayaa laga yaabaa in la siiyo gaadiid, laga bilaabo joogsiga baska ugu dhow ee la heli karo, iyadoo lagu saleynayo awoodda baska. Degmadu ma beddelayso jidadka basaska ama u safri mayso goob kale oo ka-qaybgal si ay u soo qaado ardayda.
Ardaygu waa inuu keenaa warqada ogolaanshaha waalidka ee xafiiska iskuulka oo loo fasaxaayo ardayga inuu baska la raaco isla baska cunugaaga. Xafiiska iskuulka ayaa mas'uul ka ah bixinta baska. Raacitaanka waxaa la heli karaa oo keliya haddii baska boos ka bannaan yahay.
Sidee loo qiyaasi doonaa masaafada laba mayl ah? Ayaa qiyaasaya?
Sidee masaafada loo ogaan doonaa haddii ilmahaygu ku qoran yahay Dugsiga barbaarinta Ready Start (RSK)?
Masaafada waxaa lagu cabiraa iyadoo la adeegsanayo barnaamijkeena socodka baska. Barnaamijka kumbuyuutarka, VersaTrans, wuxuu adeegsadaa khariidada GIS County Hennepin ee degmada oo dhan. Waa cabirka ugu saxsan uguna cadaaladsan masaafada udhaxeysa laba dhibic. Cabirka waxaa laga qaadayaa laynka-xariiqa wadada inta badan degan guriga koowaad ee ardayga ilaa wadada-dugsiga dhexdiisa.
Masaafada waxaa lagu cabiraa iyada oo ku saleysan masaafada socodka ee guriga cunuga ilaa dugsiga xaadiritaanka. Haddii masaafada ay ka badato laba mayl, gaadiid ayaa la bixin doonaa iyada oo aan lacag laga qaadin. Waalidiinta waxaa laga doonayaa inay bixiyaan khidmad si ay u raacaan baska haddii hoygooda uu ku yaallo laba mayl dugsiga.
Su'aalaha Ku Saabsan Khidmadaha
Waxaan qiimeynaa ujrada gaadiidka ee adeega basaska dhammaan ardayda iskuulada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee degan meel u jirta labo mayl dugsiga ay dhigtaan. Sababta oo ah baska dugsigu waa habka ugu aaminka badan ee looga baxo ugana soo noqdo dugsiga, qoysaska oo dhan waxaa si xoog leh loogu dhiirrigelinayaa inay iska diiwaangeliyaan adeegga baska. Qoysasku waa iska diiwaangelin karaan oo waxay ku bixin karaan khidmadda khadka tooska ah .
Ayaa go'aansaday in qoysaska deggen masaafo laba mayl u jirta dugsiga laga yaabo in laga rabo inay bixiyaan khidmadda adeegga baska?
$ 100 ma dabooshaa qiimaha buuxa ee gaadiidka?
Lacagtaydii baska miyaa la dhaafay miyaa haddii aan u qalmo Barnaamijka Qado Bilaashka ah iyo Qiima dhimista?
Waa maxay kharashka arday kasta? Ma jiraa qarash ugu badan qoyskiiba?
Haddii ilmahaygu uusan raacin baska maalin kasta ama hal waddo oo keliya ayaa kharashka laga bixinayaa?
Sidee loo maalgeliyaa sanduuqa deeqda waxbarasho?
Khidmadda ma saameyn doontaa ardayda dawladda iyo kuwa aan dawliga ahaynba?
Haddii aan degno aagga khidmadaha canuggaygu ma awoodi doonaa inuu u lugeeyo joogsiga baska ee ka baxsan aagga laba-mayl oo uu baska raaco iyadoo aan lacag laga qaadin?
Haddii aan ku bilowno ama ku dhammeyno adeegga wax ka yar hal sano kharashka ma la bixinayaa?
Sharci dejiyeyaashii 2001 waxay go'aamiyeen in degmo dugsiyeedyada degmadu ay siiyaan gaadiid bilaash ah dhammaan ardayda deggan meel ka fog laba mayl dugsiga. Sharcigu wuxuu awood u siinayaa guddiga iskuulka inay siiyaan gaadiid ardayda ku jirta xadka laba-mayl oo lacag la'aan ah, ama, inay lacag ka qaadaan. Haddii lacag la soo dalaco, guddiga dugsiga deegaanka ayaa mas'uul ka ah go'aaminta xaddiga khidmadda. Sannadkii 2005 Golaha Dugsiga Minnetonka wuxuu u codeeyey in la ansixiyo khidmadda cusub ee gaadiidka oo ah $ 100 ardaygii deggenaa meel u jirta laba mayl dugsiga si looga caawiyo kabista kharashka sii wadidda bixinta adeegan.
Kharashka $ 100 wuxuu daboolayaa qiyaastii afar meelood meel kharashka sanadlaha ah ee gaadiidka ardayda.
Lacagta baska ayaa laga dhaafi doonaa qoysaska uqalma Barnaamijka Qado Bilaashka ah iyo Qiima dhimista. Waalidiintu waa inay buuxiyaan Foomka Diiwaangelinta Khidmadda Basaska . Foomkan waxaa ku yaal meel aad adigu fasax ka siin karto Adeegyada Nafaqada si ay xaaladdaada ula wadaagaan Waaxda Gaadiidka. Fadlan hubso inaad calaamadeyso sanduuqan oo aad saxiixdo magacaaga. Haddii aadan xaq u lahayn Barnaamijka Qado Bilaashka ah iyo Qiima dhimista, waxaan tixgelin doonnaa codsi aan uga tanaasulno ama u dhimeyno khidmadda gaadiidka iyadoo loo eegayo xaalad-kiis. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid Barnaamijka Qado Bilaashka ah iyo Qiima dhimista, fadlan kala xiriir Adeegyada Nafaqada 952-401-5034.
Kharashku wuxuu noqon doonaa $ 100 ardaykiiba iyadoo qiimaha ugu badan qoyskiiba noqon doono $ 250 sanadkii. Ma jiro wax lacag ah oo la bixinayo kaararka baska ee ka badan $ 250 kharashka isugeynta qoyskiiba.
Khidmaddu waa isku mid iyadoon loo eegin inta jeer ee fuulitaanka.
Foomka diiwaangelinta gaadiidka iyo sidoo kale lacag-bixinta khadka tooska ah ee aagga Lacagta Gaadiidka ayaa ku siin doonta fursad aad ugu deeqdo koontada deeqda waxbarasho. Intaas waxaa sii dheer, ururada waalidiinta ayaa sidoo kale laga codsan doonaa inay ka fiirsadaan inay ku deeqaan. Lacagaha lagu deeqay waxaa lagu hayn doonaa koonto aamin ah waxaana loo isticmaali doonaa oo kaliya in lagu daboolo kharashka khidmadaha laga dhaafay ee ku saleysan dhibaatada dhaqaale.
Dhammaan ardayda, kuwa dadweynaha iyo kuwa kaleba, ee deggan meel u jirta laba mayl dugsigooda ayaa looga baahan doonaa inay bixiyaan khidmadda gaadiidka.
Maya, kaliya ardayda ku nool in ka badan laba mayl dugsiga ama bixiya lacagta baska ayaa xaq u yeelan doona inay raacaan baska iyada oo aan wax lacag ah la siinin.
Haddii ardaygu u guuro aagga khidmadda ka dib bilowga sannadka, khidmadda waa la hor marin karaa. Kala xiriir Waaxda Gaadiidka wixii qiimahoodu yahay, 952-401-5023.